ICP: Ngbanwe njikwa ike na njirimara ya | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Enwere ọtụtụ ụzọ iji chekwaa na akaụntụ maka ọkụ anyị na-eji n'ụlọ. Otu n'ime ha bụ ICP a maara dị ka ike njikwa mgba ọkụ. Ọ bụ ngwaọrụ arụnyere n'ụlọ a na-eji ebipụ ya mgbe ike eletrik karịrị ihe e nyere ya. Ọ na-adịkarị mgbe ọtụtụ ngwa eletriki jikọrọ n'otu oge na ikike nkwekọrịta anaghị agbanahụ iweta ọkụ eletrik.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ike njikwa ike ICP yana njirimara ya.
2 Kedu ICP si arụ ọrụ
3 Bụ ICP amanyere?
Establisheddị usoro njikwa a bụ maka ụlọ ha nwere ihe na-erughị 15 kW nke ike. Anyị maara na mkpụmkpụ nke ọkụ ọkụ bụ naanị obere oge ebe enwere ike weghachite ya ma ọ bụrụ na ị hụ na anyị jikọtara ngwaọrụ eletriki nke na-eme ka ikike nkwekọrịta gafere. Ozugbo anyị gbanyụrụ akụrụngwa ndị anyị ji arụ ọrụ nke ukwuu, enwere ike iji ọkụ eletrik ọzọ dị ka nke nkịtị.
ICP dị na ngalaba nchịkwa izugbe ebe usoro ọkụ ndị ọzọ dị. Onye ọrụ nke nwere ọkụ eletrik aghaghị ịma ebe ICP dị n'oge niile. Ọ bụrụ na agbanwere ike nkwekọrịta ahụ, akụrụngwa ahụ ga-arụ ọrụ ọzọ iji weghachite ọkụ eletrik nke ụlọ ahụ. Ọ na-abụkarị ezinụlọ ha maara ike etinyere na ọ naghị adịkarị karịa. Agbanyeghị, enwere oge ụfọdụ mgbe ọ dabara na ọtụtụ ngwa ọrụ amịrị na iji ọtụtụ ike eletriki n'otu oge ma ọ na - eme ka akpaghị aka pụọ.
Companylọ ọrụ na-ekesa na mpaghara ọ bụla na-agbanwe mita analog maka ndị dijitalụ, nke pụtara na ICP na-agbanye n'ime ngwa eletriki n'onwe ya.
Kedu ICP si arụ ọrụ
Ọtụtụ mmadụ na-eche ihe a ga-eme ma ọ bụrụ na ICP na-awụlị elu. Ihe kachasị dịrị nchebe bụ na ọ na-awụda elu mgbe ị na-agbanye ọkụ ma ị kenyeghị ike zuru oke iji weta ngwa ọrụ ị na-eji ugboro ugboro. N'okwu a, ihe kachasị baa uru bụ ime ka ikike eletrik dị na ya bawanye iji zere nkwụsị na-aga n'ihu na ọkọnọ.
Onye na-ere ọkụ eletrik na-enye ohere mgbanwe nke ikike nkwekọrịta kwa afọ. Ọ bụ n'ihi nke a ka anyị ga-agbakọ nke ọma ike a kachasị dị mma maka anyị iji chekwaa otu o kwere mee na ụgwọ ọkụ na ike n'iyi na ego. Onye ahia ị ga-emerịrị ka ị mara n'oge ọ bụla na ị ga-edebanye aha na ike nkịtị na marketer. Ọ bụrụ na ịchọrọ karịa ma ọ bụ obere, ị ga-agbanwe atụmatụ ego ọrụ.
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ chọrọ ịbawanye ike eletrik ahụ nkwekọrịta, ọ nwere ike ịkpọtụrụ onye ọ bụla na-ere ahịa n'ahịa nke na-enye ya ọnụego dị ọnụ ala karịa na nke kwekọrọ na ọnọdụ ya. Anyị na-eche na anyị chọrọ ịbawanye ike eletrik anyị mana naanị ihe ole na ole agbachapụla ICP n'oge kwesịrị ekwesị. O nwere ike ịbụ na anyị ga-ahazigharị ụzọ anyị si eji ngwa anyị tupu anyị agbanye igbanye ikike dị elu. Ma ọ bụ na anyị agaghị echekwa naanị ụgwọ ọkụ eletrik, kama anyị ga-etinye obere carbon dioxide na ikuku ma belata oriri ike.
Asingbawanye ike eletrik nke ụlọ nwere ụgwọ. Ekwesiri ighota na onye ahia gha aghaghachi onye nkesa na mpaghara ya ego ahu site na ugwo eletrik, nke kwekọrọ na ikike ndi a:
Right nke ndọtị 17,37€/kW + VAT
Ikike nke nnweta 19,70€/kW + VAT
Right nke njikọ € 9,04 + VAT
Bụ ICP amanyere?
E nwere ụfọdụ ụlọ na-enweghị ICP n'ime ha ebe ọ bụ na ọ bụ ezie na ọ dịchaghị mkpa. Enwere ọtụtụ ohere maka nke a. Otu n'ime ha bụ na ICP anaghị adị n'ihi na ọ bụghị iwu, ọ bụkwa ụlọ ochie ma ọ bụ n'ihi na ịchọghị ka ebipụ ọkọnọ ahụ n'oge ọ bụla. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị mkpa ịnwe ngwaọrụ a maka ebumnuche ndị a:
Chebe ulo site na igbochi ntinye eletriki site na ikpo oku gabiga ókè n'ihi iji ọtụtụ ngwa eletriki n'otu oge.
Na-echekwa nrụnye ma ọ bụrụ na ọkụ eletrik adaa. Ọ bụghị naanị na ọ na-echebe anyị pụọ na ihe ọghọm ma ọ bụ ọkụ nwere ike ịnweta, kamakwa ọ na-enyere anyị aka ịchekwa nrụnye ahụ dum ma ọ bụrụ na nsogbu ma ọ bụ obere elekere.
Companylọ ọrụ na-ekesa nwere ike ịkwụ ụgwọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ịnweghị ICP n'ụlọ. Na nke a, ọ ga-amanye ịkwụ ụgwọ mgbakwunye nke gosipụtara na ọkụ eletrik n'okpuru echiche nke ntaramahụhụ maka enweghị ICP. Nwere ike ịnweghị ngwaọrụ a n'ụlọ gị ma ọ bụ ebe ọ bụ ụlọ ochie na n'oge ahụ ọ dị mkpa iji wụnye ngwaọrụ ahụ ma ọ bụ na ịchọghị ka ọkụ ahụ ga-echekwa ma wepu ya.
Mgbe ụlọ na-enweghị akara njikwa ike, ịnwere ike izipu onye nkesa gị ka ị wụnye ya ma ọ bụ mee ya n'onwe gị. Ọ bụrụ na mita ahụ bụ maka mgbazinye ọ bụ onye nkesa na-ahụ maka ịwụnye ya. Ọ bụrụ na mita dị na ihe onwunwe gị, ị ga-etinyerịrị ya n'onwe gị.
Dabere na ma anyị kpebiri ịwụnye ya n'onwe anyị ma ọ bụ nye ndị nkesa ọrụ, ọ ga-enwe ọnụahịa dị iche. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịwụnye ya, anyị ga-akwụ onye nrụnye ọkụ ọkụ dị ala ma ọ bụ ụlọ ọrụ nrụnye. Ọnụ ego ahụ ga-adabere na akara nke onye nrụpụta ICP. Ozugbo awụnyere onye nkesa ahụ, ọ na-ahụ maka nyocha na ịchịkwa ngwaọrụ ahụ.
Nhọrọ ọzọ nke nwere ike ịba uru bụ ịgbazite ngwaọrụ ahụ. Emere ya site na onye nkesa ma obu oru maka ntinye na nkwenye. Gwọ ahụ dị ihe dịka 0.03 kwa osisi.
Oge ọ na-ewe iji gafee nyocha na ụlọ dabere na ụdị ụlọ ahụ. Ihe kachasị mma bụ na a na-eme ya kwa afọ iri ọ bụla iji chọpụta na ihe niile na-aga nke ọma. Ọ dabere na ma ndị agbata obi ha nwere ọkụ eletrik arụnyere karịa 10 kW.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ICP na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Omenala ulo » ICP
mmiri okooko osisi